Social Media Network တွေပေါ်မှာ Post တွေကိုဘယ်အချိန်တွေမှာတင်သင့်လဲ? - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
Home > နည္းလမ္းမ်ား > Social Media Network တွေပေါ်မှာ Post တွေကိုဘယ်အချိန်တွေမှာတင်သင့်လဲ?
Social Media Network တွေပေါ်မှာ Post တွေကိုဘယ်အချိန်တွေမှာတင်သင့်လဲ?
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) 12:25 PM Tutorial, နည္းလမ္းမ်ား
Twitter မှာကတော့ တစ်နေ့ကို (၁၅) ကြိမ်လောက် Tweet မယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။ Retweet ကိုတော့ အနည်းဆုံး (၇) ကြိမ်လောက်ပြန်လုပ်ပေးပါ။ Twitter မှာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ Tweet တွေလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကိုတော့အောက်ပါပုံတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Pinterest
LinkedIn ကတော့ Facebook လို တစ်နေ့မှာ တစ်ခါ Post တင်ရင်လုံလောက်ပါတယ်။ LinkedIn မှာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ Post တွေတင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့အောက်ပါပုံတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ယ်။
Google+ မှာတော့ တစ်နေ့ကို (၂) ကြိမ်လောက် Post တင်မယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။ Google+ မှာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ Post တွေတင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့အောက်ပါပုံတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Instagram
Instagram မှာဆိုရင်တော့ တစ်နေ့ကို (၂) ကြိမ်လောက် Post တင်မယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။ Instagram မှာ ဘယ်အချိန်တွေမှာ Post တွေတင်နိုင်မလဲဆို တာကိုတော့အောက်ပါပုံ တွင်ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။ Ref – socialmediatoday
Social Media Network တွေပေါ်မှာ Post တွေကိုဘယ်အချိန်တွေမှာတင်သင့်လဲ? Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 12:25 PM Rating:5Social Media ပေါ်မှာ Post တွေတင်ကြတာကအချိန်တိုင်းနီးပါးမှာတော့ တင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့Post တွေကို တင်ချင်တဲ့အချိန်မှာတင်တာထက်၊ ဘယ် Social ...
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) at 12:25 PM